- လမ်းမီးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော ထရန်စဖော်မာ(၅)လုံးဝယ်ယူရန်
- ဓာတ်အားခွဲရုံများ(ထိန်း/ပြင်)ဌာနခွဲနှင့် မြေအောက်ဓာတ်ကြိုး ဌာနခွဲတို့တွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သော 3Ø10 kW , 400/230V Sound Proof Generator (2)Set ဝယ်ယူရန်
- 33kV Auto Recloser (5)Set တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများထပ်မံဝယ်ယူရေး
- 33kV Time Sequential System Auto Sectionalizer , 33kV,11/6.6kV Auto Switching Capacitor Bank တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထပ်မံဝယ်ယူရန်
- ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းသုံးအခြားပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်
- Yangon Control Center (YCC) ရှိ Control Room တွင် Main Video Wall Display အဖြစ် အသုံးပြုတပ်ဆင်ထားရှိမည့် 55" Video Wall Display (၁၂)ချပ်အား ဝယ်ယူရန်
Invitation for Bids (International Competitive Bidding)
1. The Government of the Republic of the Union of Myanmar has receivedaloan (MY-P10) from Japan International Cooperation Agency (JICA). The Bid is invited by Yangon Electricity Supply Corporation (YESC) as follows;
YESC/JICA/ MY-P10 (ICB/ 02)/ 004_Lot1
Component IV : Procurement of Utility Vehicles
1 Feb 2021 (14:00) Myanmar Local Time
Purchase upon payment ofanon-refundable fee of Myanmar Kyats 50,000 (Kyat Fifty Thousand only) in cash
2.	Interested eligible Bidders may obtain further information from the website (http:// www.moee.gov.mm) or the documents from the Material Planning Department, Yangon Electricity Supply Corporation, Ministry of Electricity and Energy, at No. 197/199, Lower Kyeemyindaing Road, Ahlone Township, Yangon, Myanmar.
3.	Bid Documents must be delivered to the address above mentioned on or before the deadline date and time. 4.	Bid must be accompanied byaBid Security of the amount equivalent of JPY 4,000,000 (Japanese Yen Four Million only).
YESC’s Tender Committee
IFB No: YESC/ JICA/MY-P10(ICB/ 01)/001
Component I : Design, execution and completion of Installation of 66 kV GIS Substations and 66kV related distribution lines on Turnkey Basic
24 Dec 2020 (14:00) Myanmar Local Time at the following address
15 Feb 2021 (14:00) Myanmar Local Time
2.	Interested eligible Bidders may obtain further information from the website (http://www.moee.gov.mm) or the documents from the Material Planning Department, Yangon Electricity Supply Corporation, Ministry of Electricity and Energy, at No. 197/199, Lower Kyeemyindaing Road, Ahlone Township, Yangon, Myanmar.
3.	Bid Documents must be delivered to the address above mentioned on or before the deadline date and time.
4.	Bid must be accompanied byaBid Security of the amount equivalent of JPY 40,000,000 (Japanese Yen Forty Million only).
Material Planning Department, Yangon Electricity Supply Corporation,
No. 197/199, Lower Kyeemyindaing Road, Ahlone Township, Yangon, Myanmar.
Tel. : 95 1 2301857, Fax. : 95 1 229155
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘတ်ဂျတ်မှကျခံ၍ အပ်နှံဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများနှင့် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန၊ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘတ်ဂျတ်မှကျခံ၍ အပ်နှံဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများနှင့် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန၊ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘတ်ဂျတ်မှကျခံဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-
ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်၀ယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်
၁ 30(T)/YESC/2020-2021 ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူး ရေးဌာန၊ကောင်းကင်ဓာတ်အားလိုင်းတည်ဆောက်ရေးဌာနခွဲမှ ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်း(၂)ခုဖြစ်သော ရွှေပြည်သာမြို့ ကျောက်တိုင်စက်ရုံဝင်းအတွင်း မလွတ်ကင်းသော ၃၃ ကေဗွီ လှော်ကား-AaAb ဓာတ်အားလိုင်းများ ပြောင်းရွှေ့တည်ဆောက်ခြင်း နှင့် ၃၃ ကေဗွီ ဝါးတရာ-ရွှေပြည်သာ ဓာတ်အားလိုင်းဆွဲသားခြင်းတို့ အတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများအားဝယ်ယူရန်- စတင်ရောင်းချမည့်ရက် -(၁၉.၁၀.၂၀၂၀) မှ (၁၈.၁၁.၂၀၂၀)ထိ တင်ဒါပိတ်မည့်ရက် - (၁၉.၁၁.၂၀၂၀) တင်ဒါပိတ်မည့်အချိန် - (၁၄ : ၀၀) နာရီ တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါလိပ်စာတွင် ရုံးချိန်အတွင်းလာရောက် စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်- အမှတ် (၁၉၇/၁၉၉)၊အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း၊ အလုံမြို့နယ် ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ပစ္စည်းစီမံရေးဌာန၊ ရန်ကုန်မြို့ ၊ ဖုန်း၊ ၀၁-၂၂၀၈၅၉၊ ၀၁-၂၂၀၈၁၆
- 33kV Time Sequential System Auto Sectionalizer (15)Set , 33kV Auto Switching Capacitor Bank (10)Set and 11/6.6kV Auto Switching Capacitor Bank (35)Set တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်
- ဘိလပ်မြေနှင့် သံချောင်းလုံး (အရွယ်စုံ)ဝယ်ယူရန်
- 0.4kV နှင့် 11kV ဓာတ်အားလိုင်းများတည်ဆောက်ခြင်း(အစာထိုးလုပ်ငန်းများ) ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သောပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်
- 0.4kV နှင့် 11kV ဓာတ်အားလိုင်း များတည်ဆောက်ခြင်း (တိုးချဲ့လုပ်ငန်းများ)ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သောပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်
- Forklift (8 Ton) (၁)စီးအားဝယ်ယူရန်
- ဒီဇယ်ဆီ (၆၆၂၁၀)ဂါလံ ဝယ်ယူရန်
- ဓာတ်အားခတောင်းခံလွှာ(Bill)စာရွက်နှင့် Bill Printing Printer ဝယ်ယူရန်